Har'a guyyaan godaantota addunyaa yaadatame oola - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dhaabbanni Godaantotaa Idiladdunyaa (IMO) Libiyaatti garbummaan akka jiru odeeffannoo sassaabeera jedha
Addunyaarra namoonni sababii adda addaatiif eddoodhaa eddootti ni godaanu. Kuun sababii siyaasaa, dhabiinsa tasgabbii fi dhiibbaa jijirama qilleensaatiin, kaan ammoo sababii jireenya gaarii barbaachaatiin biyyaa gara biyyaa adeemu.
Bara kana keessa garuu baqattuummaan kan baayyate fakkaata.
Kanaaf fakaatas dhaabbanni motummoota gamtomanii 'Unite Nations' bara 2000 irraa keesse Muddee 18 akka guyyaa baqattootaatti yaadatamu kan murteesse.
Guyyichis baayyina lakkoofsa baqattoota addunyaa dabalaa dhufeen walqabatee, dhaabbata motummoota gamtoomaniin kan murtaa'eedha.
Yaadannoo guyyaa bara kanaatiifis hundi keenyaa dhimma baqattootaa irratti hojachuu waadaa haa galu jechuun ture barreessaa Mummeen dhaabbatichaa ergaa kan dabarsan.
Guyyaa baqattoota addunyaa yoo yaadannu, gumaataa fi barbaachisummaa baqattooota addunyaa million 258 'tiif beekumsa ni kennina, jedhaniiru Barreessichi Antoniyii Guteraa ergaa guyyicha ilaalchisuun dabarsaniin.
Itti aansuunis baqattoonni bakka hundattuu bu'aalee dinagdee, hawaasaa fi aadaa buusaa jiraachusaanii ragaan ni mul'isu. Haa ta'u malee, addunyaa irratti jibbi baqattoota dabalaa jira. Baqattootaaf gadduun gonkumaa muddaa ta'ee hinbeekus jedhaniiru.
Jechuma kana kan dhugomsu, baqattoonni afriikaa kumaatamaan lakkaa'aman osoo ardii isaanii keessaa hinbahiin daldala garbumaatiif saaxilamaa jiraachuun kan dhagahamees baruma kana keessa ture.
Irra caalaan balaa baqattummaa kanaaf saaxilamaa kan jiranis Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota afriikaati.
''Dhimma baqatummaa kana to'achuuf qondomina addunyaa sirriitu barbaachisa kan jedhan barreessichi, yoo akkas ta'ee malee haala ajandaa misooma walitti fuufaa 2030'tti mirga namoomaa kamiyyuu kabachiisuun hin danda'amus'', jedhaniiru.
Waa'eedhuma jireenya baqatummaa kana ilaalchisee dhiheenya kana seenaa dargaggoota Oromoo lama isiin dubbisiisuun keenya ni yaadatama.
Har'as guyyaa baqattoota addunyaa kana sababeefachuun barreefama BBC Afaan Oromoo Haaruun Ahimad waliin taasisee ture irra deebiin akka dubbiftan isiin affeerre jirra.